Imaamul Ghazali Eebe ha u raxmadee ayaa isagoo ka waramayo cajaaibta qalbiga aadanuhu leeyahay waxa uu yiri “Qalbigu waxaa uu leeyahay sharaf aysan la wadaagin dhamaan xubnaha kale ee jirka. Sharafkaan waxaa uu ka yimaadaa labo meelood: mid waa awoodda uu leeyahay midina waxay ka timaaddaa aqoonta/cilmiga.”
Isagoo sii faahfaahinayo midda danbe waxaa uu yiri “qalbigu waxaa uu awood u leeyahay inuu weeleeyo dhammaan aqoonta aduunka taal, mana jiraan wax xaddido muggiisa. Waxaa lagu keydin karaa cilmi diimeed iyo mid maadiba, inkastoo uu qalbigu yahay xubin aan qaybsami Karin hadana waxaa uu isu keeni karaa saynis oo dhan. Dhabtii aduunka oo dhan waxaa uu qalbiga dhexdiisa ku noqon saxar buur la dulsaaray”.
Awooddaan Eebe siiyay aadanaha ee ah inuu baran karo wax walba oo uu doono dadku ma wada arkaan. Runtii inteenna badan waanba moognahay awooddaas sidaas darteed inagoo cindiga ku hayno inaan horukac samayno ayaa waxa lugaha nagu dhagan cabsi aan ka qabno inaan baran wayno waxa aan doonayno. Haddaan isku badiyo waan ku wareeri; labo maaddo iskuma dari karo; caruur koris iyo cilmi raadin isuma keeni karo iyo cudur daarro la mid ah ayaa nagu badan. Laakiin had iyo jeer waxaa jiro dad Eebe tusay awooddooda kana faaiidaysto fursadaha soo maro. Dadkaas waxaa ka mid ah Warsame Cumar Xuseen oo ku magic dheer Warsame Shiidleey.
Warsame waxaa uu ku dhashay Shiidleey oo ku taal dhul daaqsimeedka Diirharo ee gobalka Gedo qiyaasti 1993-di. Sanadihii hore noloshiisa waxaa uu ku qaatay miyiga. Ilaalinta maqasha guriga joogto, soo celinta weylaha casarki si aysan lo’ada ooga hortagin iyo ugu danbeyn la wareegidda heynta lo’ada jilka ayuu si isdaba joog ah ugu kala dallacay 12ki sano ee noloshiisa u horraysay. Barashada dhaqidda xoolaha waxaa uu u garab waday xirfadaha kale ee mustabalka uusan ka maarmi doonin sida kooro qoridda iyo barshada Qur’aanka.
Marki da’diisu foodda galisay 12 sano waxaa uu ka adkaaday raacidda lo’da, oodidda xeradeeda, waraabinteeda iyo ka war-qabka baahideeda kale. Sidoo kale waxaa geela lagu xiray aleelki ugu horeeyay oo uu isagu gacantiisa ku qoro. Dadnimadaan dheeraadka ah ee ka muuqato Warsame waxay fakar kale ku dhalisay qosykiisa oo is yiri show haddii meel uu wax ku barto la gayn lahaa nin ayuu noqon lahaa. Walaashii Xaliimo Cumar Xuseen ayaa arintaas dusha u ridatay kuna qancisay waalidkiis inay Warsame fursad siiyaan, arintaasna waa lagu raacay.
Warsame oo aan waligiis magaalo arag ayaa subax gacanta la soo qabtay, loona sheegay in ree magaalnimo lala rabo. Waxaa la siiyay dardaaran ku saabsan sababta baadiye looga waday isagoo ciidankiisa baahi weyn loo qabo. Isaguna waxaa ku jawaabay waa ballan inaanan noqon mid lagu qasaaray.
Isagoo ka waramayo waqtigii uu magaaladda yimid waxaa uu yiri “Ma fogeyn markii aan miyiga ka soo galay. Waan xusuustaa subixii aan magaalada soo galay. Hanti waxa aan ka lahaa macawiis guduudan oo uu aabbahay i siiyay iyo shaar diilimo leh oo isaguna walaalkay Moxamed Xussein Cadde uu Xamar iiga soo dhiibay.
Magaaladu waa nolol kale. Tii aan ku koray aad ayaa ay ugu duwan tahay. Si weyn ayaa ay ii soo dhoweysay magaaladu. waa aniga nastay oo caddaan gaaray! Cuntada magaaladu macaanaa! Midabbo badanaa! Basbaasku se cadawsanaa oo kululaa oo reer miyi u daranaa!
Waxbarashada maantay aan qeybteedii koowaad ee Jaamacadda Camuud ku gabogabeeyay ayaa aan berigaa billaabay. Go'aan adag ayaa uu ahaa. Ballan weyn oo aan nafteyda iyo reerkeygaba ka qaaday ayaa uu ahaa.
Warsame waxaa la geeyay Baardheere oo laga qoray iskool hoose/dhexe. Sidoo kale waxa uu billbaabay Qur’aanki meel fiican isagoo u marayo uu dugsigii ka kala-kacay intuu miyiga joogay. Noloshii adkayd ee miyiga ayaa horay ugu soo diyaarisay inuusan nasan nin shaqo ku taal. Wuxuu habayn iyo maalinba waqtigiisa ku bixiyay akhris iyo qorid taasoo u suura galisay inuu muddo kooban kusoo gabagabeeyo Qur’aanki iyo waxbarashadi hoose.
Sidaas ayuu ku waday ilaa uu ka qalin jabiyay jaamacadda Camuud oo uu ku bartay dhaqaalaha iyo siyaasadda. Intii uu waxbarashada ku jiray, naftiisa kuma uusan koobin inta macalimiintu u dhigaan ee wuxuu ku garab waday howlo badan oo uu naftiisa ku hormarinay. Waxaa uu akhrin jiray buugaag tiro dhaaftay, waxaa uuna naftiisa ku xukumay akhriska caddad go’an oo dhigaal ah bil walba.
Akhriski badnaa waxaa uu furay xirfado kale oo uu warsame lahaa balse aasnaa. Waxaa uu billaabay curinta sheeko-faneedyo, waxaa kasoo burqaday sugaan waxaana uu diwaan galiyay maansooyin uu ku cabbiray arimo kala duwan. Intii uu Warsame akhrinayay dhigaalki u badnaa sheeko-faneedyadda waxaa u muuqatay in dood ka furantahay qaabka loo qoro sheekooyinka. Inta badan sheekooyinka la qoro waxaa lagu wariyaa ‘qofka sadexaad’ (third person). Warsame waxaa uu ku biiray dadka qabo in sheegadu ku macaantahay inuu wariyo qofkay qabsatay sidaasna loo qoro (first person).
Warsame dooddaan af maran kagama qayb qaadan ee si hadalkiisu qiimo u yeesho dooddana uu qayb ooga noqdo waxaa uu ku go’aan qaatay inuu isaguba qorayaasha ka mid noqdo. In buug la qoro waa shaqo adag oo waqti badan u baahan, laakiin mashquulka uu abuurayo qoraalku Warsame ma walaac galin, lamana uusan sugin inta uu jaamacadda dhamaynayo sidi ay dad badan kula taliyeen ee waxa uu guda galay qoridda buuggiisa uu ugu wanqalay ‘Baalkii Madoobaa ee Noloshayda’. Buuggaan oo la daabacay 2016-ki ayaa ku guulaystay abaal-marinta la siiyo buugga ugu fiican sanadka kasoo ay bixiso Garanuug. Garanuug Limited waa shirkad waxbarasho iyo faafin. Higsi waxaa u ah: “soo saarista ummad garaad suubban iyo aqoon sare leh”
Warsame intaas waxaa u dheer inuu xubin fir-fircoon ka yahay ururka African Youth Economist Association haddana uu yahay xog-hayntiisa. Sidoo kale waxaa uu ka qayb gala dooddaha fagaaraha ee quseeyo siyaasadda iyo arrimaha bulshada iyo waliba mararka qaar kuwa suugaanta.
Warsame Shiidleey waxaa muujiyay dadaal dheeraad ah. 12-ki sano ee uu magaalada joogay waxaa uu ku dhaafay kuwo 30 sano joogay iyo kuwii la ayniga ahaa ee ku dhashay baladka. Waxaa uu ka faaiidaystay fursaddi ay qoyskiisu siiyeen waxaana uu oofiyay ballanti uu soo qaaday. Intaan ogahay waxaa uu noqday qoraagi ugu caansanaa ee kasoo baxo Gedo 20-ki sano ee lasoo dhaafay. Lo’ dhaqaalaynti waxaa uu ku badalay lacag dhaqaalayn, kooro-qorriddina waxaa uu ku badalay buug qorid, jiibti uu yaxniga habaynki ka weheshan jiray ee geedaha iyo lo’da u xaraysan kaliya ka dhagaysan jireen waxaa uu ku badalay maansooyin iyo geeraaro uu ka jeediyo taleefishinno kumanaan qof daawanayaan. 12-ki hore waxaa badalay 12 ka faaiido badan waxaa uuna ku rajo weyn 12 ka sii fiican inuu xigo doono Eebe idmo
Imisaa canug waxbasho loo diray sanado ka dib soo laabtay isagoon waxba soo baran? Imisaa habayn iyo maalinba ku tallamayso inay wax bartaan laakiin sugayo firaaqo badan inay helaan; Imisaa waxbarasho ku jirto laakiin aan eray kale ku darin inta macalinku siiyo; imisaaba aaminsan in carrabki adkaaday oo aysan wax baran karin? Kii aad tahayba ogow in aad hammigaada gaari karto haddii aad dadaalkeeda la timaado.
Kumannaan Warsame oo kale ah ayaa duurka lo’ iyo geel ku raaco haddii uusan Eebe Xaliimo oo kale u bixinna maankoodi miyi ku qasaari doonaa!